Iindaba - ukuvavanywa kwemakethi yefender fender
Igxininisa ukuqonda okusemgangathweni okubonelelwa ziingcali zeshishini. Le ngxelo ibonelela ngovavanyo oluneenkcukacha malunga neentsingiselo eziphambili zeemarike kwaye inikezela ngolwazi olubanzi malunga nolwakhiwo lweshishini lokukhuselwa kwenqanawa lehlabathi. Ingxelo ithathela ingqalelo izinto ezikhuphisanayo, ezibalulekileyo ekunyuseni ishishini lakho liye kwinqanaba elitsha. Olu xwebhu ngumthombo obalaseleyo wolwazi, onika uhlalutyo olunzulu lwecandelo langoku nakwixa elizayo.
Ingxelo ibonelela ngemeko yokhuphiswano lwabathathi-nxaxheba abakhokelayo kwimarike. Ingxelo yabelana ngolwazi olwahlukileyo kwintengiso ukunceda abadlali abaphambili kunye nabangeneleli abatsha baqonde amandla otyalo-mali kwimarike yenqanawa yelizwe. Umhlaba okhuphisanayo ubonelela abathathi-nxaxheba abakhokelayo kwisabelo sentengiso esipheleleyo ngokusekwe kumthamo wentengiso kunye nevolumu evelisiweyo. Ingxelo ibonelela ngefuthe lehlabathi, abakhuphisana nabo kunye nomyinge wenzuzo yomntu ngamnye othatha inxaxheba. Ukongeza, ingxelo ikwabonelela ngolwazi oluneenkcukacha kwimiba ephambili, enje ngezinto zokuqhuba kunye nezinto ezinomda, eziya kuthi zimisele ukukhula kweemarike kwixesha elizayo.
Le ngxelo ibonelela ngokubona okubalulekileyo kwintengiso yehlabathi, ngakumbi amathuba okhoyo ngoku, imikhwa kunye nemidlalo yokhuphiswano. Ingxelo yenqanawa yemakethi yefender fender ihlalutya ngokweenkcukacha ifuthe lophuhliso lwemveliso, iintlobo zemveliso, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, ukwenziwa kweetyathanga lexabiso, isabelo sentengiso, kunye nokukhula kubathathi-nxaxheba basekhaya nabasekhaya. Yahlula ubungakanani bemarike ngokobungakanani kunye nexabiso ngokwendlela nodidi lokusetyenziswa. Ingxelo ibandakanya idatha edlulileyo kunye nedatha ebonisiweyo, iindawo zokusebenzisa, iindlela zokuxabisa, kunye nemibutho ephambili yeendawo zobume bomhlaba.
Uhlalutyo lokwahlulahlula intengiso kwihlabathi jikelele: Trelleborg, Longwood, Bridgestone, Jiere Shipping, Taihong, Anchor Shipping, Maritime International, KONE, Hutchinson, Sumitomo ngerabha, Noreq,
Ukongeza, ingxelo yophando yentengiso ikwabonelela ngohlalutyo lwemarike yengingqi ngemveliso, ukuthengisa, urhwebo kunye noqikelelo lwengingqi. Ikwabonelela ngezicwangciso zotyalo-mali kwimarike yefender fender, ezinje ngeempawu zemveliso, uhlalutyo lwamaxabiso, imisebenzi yejelo, amathuba otyalo-mali wengingqi kunye noshishino, ukubalwa kweendleko kunye nengeniso, kunye nokuvavanywa kokusebenza koqoqosho.
Iinqanawa zeTec, Ibhloko edibeneyo, China Irabha Fender, Irabha yeFender, Inqanawa yomoya, Iibhola zomoya zasemanzini,